Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd T20I: When and where to watch match LIVE - Cricket@22Yards
Home Latest News Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd T20I: When and where to watch match LIVE
Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd T20I: When and where to watch match LIVE
AFG vs ZIM. (Source: Twitter)
Afghanistan will be aiming to seal the series when they take on Sean Willams-led Zimbabwe on Friday.
When and what time will the Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I match begin?
The Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I will begin at 3.30 PM IST on Friday (March 19).
Which channel will telecast the Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I match?
Unfortunately, the Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I will not be aired live on any channel in India.
How to watch the live streaming of the Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I match?
The Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I can be streamed live on FanCode App.
Which are the likely playing XIs of the Afghanistan vs Zimbabwe 2nd T20I match?
Previous articleSuryakumar Yadav, Prasidh Krishna, Krunal Pandya get India call-up for England ODIs
Next articlePSL 2021 likely to resume in early June
Mushtaq Ahmed Appointed As Spin Bowling Consultant For Pakistan